नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' सहित ४ हजार जनमुक्ति सेनामाथि भएको त्यो भ'यानक ६ घण्टे ह'वाई ह'मला - Himali Patrika
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सहित ४ हजार जनमुक्ति सेनामाथि भएको त्यो भ’यानक ६ घण्टे ह’वाई ह’मला
हिमाली पत्रिका १८ माघ २०७६, 3:33 pm
‘लौ लौ साथी हो छिटो गरौं, फा इट शुरु भइहाल्यो । गाउँतिर भएका सबै साथीहरु छिटो सेफ हुने (सुरक्षित स्थानतिर लाग्ने) भन्नेछ, तपाईहरु सबै आरएचक्यू (क्षेत्रीय हेडक्वार्टर)सँग कोर्डिनेशन गरेर जंगलतिर लाग्नुस् ।’
सञ्चारका साथीको कडा कासनसँगै आधा भात थालीमै छोड्दै गुण्टागुण्टी बोकेर जंगलतिर टाप कसियो ।
उकालोमा हस्याङ–फस्याङ गर्दै दौड्दा दौड्दै तल त्रिवेणी खोला आसपासमा प ड्कि एका ब मगो लाका ध म काले वारिपारिका पहाडहरु थ र्किन थालिसकेका थिए । र, क्षणभरमै शान्त त्रिवेणी खोला, गैरीगाउँ, दुम्ला एवम् आसपासका डाँडापाखाहरु यु द्ध भूमिमा परिणत भइसकेका थिए ।
हप्ता दिनअघिदेखि नै हाम्रो पिछा गरिरहेका सरकारी सेनाका जा सुस विमान र ल डा कु हेलिकोप्टरले त्यस दिन बिहानैदेखि हामीमाथिको आकाशमा कयौं चक्कर मा रि सकेका थिए । उता पैदलरुपमा चारैतिरबाट सरकारी सेना ‘पाथिभरा अ प्रेसन’ लिएर घेरा कस्दै अघि बढिरहेको खबर आइरहेको थियो । यसले गर्दा पनि सम्भावित भि ड ण्तलाई झनै नजिक्याइरहेको थियो ।
२०६२ पुस ११ को बिहान । हामी थियौं, रोल्पाको पश्चिम–दक्षिण क्षेत्र गैरीगाउँको दुम्लामा ।
सरकारी सेना पाथिभरा अ प्रेशन लिएर ‘माओवादी आधारइलाका’ त ह स नहस पार्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेको थियो भने माओवादी एकतर्फी यु द्ध वि रामको घो षणा गरी देशभर राजनैतिक कार्यक्रममा व्यस्त थियो ।
सोही क्रममा आधारइलाकामा कार्यरत माओवादी जनसेना तथा नेता कार्यकर्ताहरु लोकतान्त्रिक जनप्रदर्शन अभियानको क्रममा आधारइलाकाका पाँचओटै जिल्लामा जनसभा र मार्च गर्दै हिडिरहेका थिए ।
रोल्पाको भावाङ, रुकुमको रुकुमकोट, सल्यानको थारमारे र दाङको बाघमारेमा जनसभाहरु सम्पन्न गरेर उक्त टोली प्यूठानको लागि अघि बढ्दै थियो । साथै जनमुक्ति सेना ‘ढाडमा टेकेर टाउको हा न्ने’ गण्डक अभियानका लागि पूर्व जाने तयारीमा थियो ।
अभियानकै क्रममा त्यसदिन जनमुक्ति सेना नेपाल पाँचौं डिभिजन र आधारइलाकाका माओवादी नेता कार्यकर्ताहरुको ठूलै समूह थियो– दुम्ला र आसपासका गाउँमा ।
हिउँदयाम भए पनि त्यति सारो जाडोको महसुस भएको थिएन । बिहानैदेखि सरकारी सेनाको बढ्दो चलखेलले स्थिति फेरिदै थियो ।
जनमुक्ति सेना सरकारी सेनाको सम्भावित आ क्र म ण बाट बच्न र पाथिभरा अ प्रे श नको लक्ष्य त ह स नहस पार्न आ–आप्mनो आर्कमा तयारी अवस्थामा बसिसकेको थियो ।
हामी दुम्ला गाउँको सिरानमा पुगिसकेका थियौं– जंगल छेऊमा । दुई/चार जना भए पो गाउँमै छिप्न सकिन्थ्यो, हामी त थियौं झण्डै चारहजारको संख्यामा । त्यसैले सरकारी सेनाको आँखा छल्न र ह वाई ह म ला बाट बच्न सबैभन्दा उत्तम उपाय जंगलमा लुक्नु नै हुन्थ्यो ।
दिउँसोको ११ बजिसकेको थियो त्यतिखेर । दुम्लागाउँकै पल्लो डाँडोमा घ मा सान भि ड ण्त भइरहेको थियो– जनसेनाको ज्वारस्मृति ब्रिगेड र त्रिवेणी भएर अघि बढेको सरकारी सेनाको बीचमा ।
करीब पौने घण्टासम्म त ल-डा ई घ मासान नै भयो । न त सरकारी सेना अघि बढ्न सक्यो न त जनसेना नै पछि हट्यो । जनसेनासँग ल-डा ईका लागि आवश्यक पूर्वतयारी नै थिएन । उ त राजनैतिक अभियानमा हिडिरहेको थियो ।
तर, सरकारी सेना भने माओवादी आधारइलाका ध्व स्त पार्ने पूरापुर तयारीका साथ चारैतिरबाट ठूलो संख्यामा परिचालित थियो । स्थल र हवाई सर्पोट पनि राम्रोसँग मिलाएको थियो उसले ।
पौने घण्टासम्मको आमने सामने भि ड ण्त पछि जब सरकारी सेनाले हवाई ह म ला गर्न थाल्यो, ल डा ईको ट्रेन नै बदलियो । र, उसले एकतर्फी ह वाई ह म ला तेज बनायो ।
ठूल्ठूला सल्लाका फेदहरु हाम्रो सहारा बने– फा इ टर हेलिकोप्टरबाट हा नेका गो ली बाट बच्नका लागि । झ्याम, बुट्यान र रुखहरु दृष्टिकभर बने– जासुसी विमानको आँखा छल्नका लागि । जासुसी विमानले देख्यो कि ह मला गर्न हेलिलाई निर्देशन दिइहाल्थ्यो । त्यसैले दृष्टिकभरमा लुकेर जासुसी विमानबाट ओझेल पर्नुको विकल्प थिएन ।
दुम्लाको आकाशमा विशेष यन्त्रजडित जासुसी विमान र अत्या धुनिक ह ति या र जडित दुई/दुईवटा ल डा कु हेलिले दर्जनौं पटक चक्कर मा र्दै एकोहोरो गो ली र मो र्टारहरु वर्षाइरहे ।
हवाई ह म लाको प्र तिरोध गर्न जनसेनासँग न त पर्याप्त हति-यार थियो न त अवस्था नै । त्यसैले जनसेना पनि आ-आफ्नो पोजिसन एक्सपोज नगरी जंगलमै छिप्यो ।
आकाशबाट सरकारी सेनाको जासुसी विमानको निर्देशनमा ल डा कु हेलिकोप्टरले यस्तो ह म ला ग¥यो कि सायद बमगो लीहरु पनि उम्रने भए आजभोलि दुम्ला र आसपासका गाउँहरुमा ब म गो लीका रुखहरुले ढपक्कै ढाकिसकेका हुने थिए ।
दिउँसो १२ बजेदेखि शुरु भएको ह वाई ह मला साँझ अँध्यारो नहुँदासम्म जारी रह्यो ।
जासुसी विमानको निगरानी र निर्देशनमा दुईवटा ल डा कु हेलिकोप्टरको लगातार ६ घण्टाको भी षण ह मला कम्ती भयानक थिएन । हाम्रा लागि ६ घण्टाको त्यो छोटो समय निकै लामो, सन्त्रासमय, भयानक हुनुकासाथै यु द्ध मोर्चाको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने अवसरको रुपमा पनि बित्यो ।
चिल्लो टेबलअघि बसेर काल्पनिक यु द्ध का कलात्मक कथा पढेर आफूलाई कथाको हिरोसँग तुलना गर्दै रोमाञ्चित हुनु र टाउकैमाथिबाट ब म गो ला बर्षिरहेको वि भत्स, भयावह र वास्तविक कथाको पात्र बन्नु । अहो ! पूरै आकाश पातालको फरक कुरा रहेछ ।
यु द्ध मोर्चा गफाडीले गफ लगाएजस्तो सजिलो कहाँ रहेछ र ? सुइकिदै आउने गो लीले टाउकैमाथिका रुखका पातहरु झा र्दा, आफू उभिएको जमीनै थर्काएर मोर्टारहरु वि ष्फो ट हुँदा……….??? साँच्चै, त्यतिबेला हाम्रो हालत हेर्नलायककै थियो ।
खैर, हामी थियौं एक भी षण यु द्धमोर्चाको बीचमा । हाम्रो मनस्थिति जे जस्तो भए पनि यु द्ध मोर्चाको आभारभूत नियम हामीले पालना गर्नैपर्दथ्यो । सकेसम्म प्र तिरोध गर्ने र नसके पछि हट्ने त यु द्ध को सामान्य नियम नै हो । हामी पनि ठीक त्यही हालतमा थियौं ।
यु द्धमोर्चामा आइपर्ने सम्भावित ख त रा बाट सन्त्रस्त, भयभीत र आ क्रोशित हामी ज बर्जस्त यु द्धमोर्चाको वास्तविकता, वि भत्सता र भयावह अवस्था भोगिरहेका थियौं त्यतिखेर । र, क्रमशः पछि हटिरहेका थियौं ।
अघि नै बताइसकें ह वाई ह मला हुनुपूर्व नै हामी जंगलमा पुगिसकेका थियौं । बाजागाजा, ड्रेस र अन्य सरसामानले भरिएका ठूल्ठूला झोलाहरु, सोलार सेट, कम्बललगायतका सामानले बेस्सरी थिचिएका थियौं हामी ।
एकातिर सामान सुरक्षित पनि गर्नु थियो, अर्कोतिर यु द्ध मोर्चामा घाइते भएका यो द्धा हरुलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने जिम्मा पनि । सानातिना भि डण्त, ह वाई आ क्र मण, दु श्मन सेनाको घेराबन्दी र लखेटाईमा परे पनि यति लामो र भी षण आ क्र मणमा यसअघि परिएको थिएन । त्यसले गर्दा पनि कता–कता आ तं कित र हतोत्साही भइयो शुरुमा ।
ह वाई ह मला शुरु भएलगत्तै तत्कालिन केन्द्रीय आधारइलाका इन्चार्ज नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, तत्कालिन जनमुक्ति सेना नेपाल पाँचौं डिभिजनका कमिस्नर हेमन्त प्रकाश ओली ‘सुर्दशन’लगायतका नेताहरुलाई पनि हामीसँगै देख्दा मन अलि ढुक्क भयो । तर, पछि को कतातिर लागे, थाहा भएन ।
दिनभरजसो दुम्लागाउँ माथिको जंगलमा कतिबेला दश/पन्ध्रजना, कतिबेला चार/पाँच जना भएर बिताइयो ।
सरकारी सेनाले दर्जनौं पटक टाउकैमाथिबाट चक्कर मा र्दै ल डाकु हेलिबाट एचएमजी, एलएमजी, जीपीएमजीबाट खाजा भुटेसरी अन्धाधुन्ध आ क्र मण गरिरहे । उनीहरुलाई न त गाउँघर, सर्वसाधारण, गाईभैसी र घरगोठको मतलब थियो न त अरु कुनै ।
दुम्ला र वरपरको जंगल, डाँडापाखा, भीरपहरा र गाउँबस्ती सबै–सबै ‘आ तं क कारी’ बनेका थिए उनीहरुका लागि । र, ‘आ तं क कारी’हरुको अन्त्य गर्न जथाभाबी ब मगो ली बर्षाउनमै व्यस्त थिए ।
बेला–बेलामा खसाल्ने मो र्टार र ब मका धमकाले जमीनै भासिएजस्तै गरी थर्काउँथ्यो भने टाउकैमाथिका रुखका पात झार्दै गो लीहरु चुइकिदा मु टु नै सिरिङ्ग हुन्थ्यो ।
हेलिकोप्टरबाट आ क्र मण भइरहँदा हामी ठूल्ठूला सल्लाका फेदवरिपरि घुम्दै गो ली छल्थ्यौं ।
त्यतिखेर लाग्थ्यो, ‘हामी कस्तो अर्कै संसारका जीवहरु रहेछौं र उनीहरु यसरी हामीमाथि खनिरहेका छन् । राष्ट्रको ढुकुटी सिध्याएर आफ्नै देशका नागरिकमाथि किन यस्तो आ क्र मण ? आखिर हामीले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको माग गरेका न हौं । सबैखाले उत्पीडन, शोषण दमनको अन्त्य गर्न पो भनेका हौं ।
अर्बौं खर्च गरेर सरकारी सेनाले दुई/दुईवटा हेलिकोप्टर र जासुसी विमानबाट आ क्र मण गरिरहँदा पनि हामी सकुशल थियौं । अर्थात् उनीहरुको लक्ष्य, उद्देश्य एक हात पर पनि सरेको थिएन । त्यसैले ह वाई हमला र सम्भावित ख तराका बीचमा पनि उनीहरुका लागि हामी ज्यादै मूल्यवान् र दुर्लभ हुन पाएकोमा गौरव गरिरहेका थियौं ।
ह म लाको बेला हेलिकोप्टर र विमानबीच उनीहरु सेटमार्फत् नियमित कोर्डिनेशन र निर्देशन गरिरहेका हुन्थे । उनीहरुले सेटमा बोलेको कुरा हामीले एमएफ रेडियोमार्फत् सजिलै सुन्न सक्थ्यौं । उनीहरुबीचको कुराकानीले कतिखेर उनीहरुको आ क्र म ण र योजनाका बारेमा बुझ्न सहज हुन्थ्यो भने कतिखेर आ तं कित तुल्याउँथ्यो ।
खुल्ला डाँडो वा गोठबाहिर निस्कियो कि जासुसी विमानबाट हेलिलाई निर्देशन दिइहाल्थ्यो । सायद उनीहरु मनोवैज्ञानिकरुपमा हामीलाई आ तंकित पार्न पनि चाहन्थे । र, अनुमानकै भरमा भनिदिन्थे– ‘लौ, ऊ त्यो डाँडाको रातो घरमै मो र्टार खसाल्, ऊ परको घरको झुप्रोमै हा न्दे, सा लेहरु त्यहीभित्र बसेका छन्, त्यो घर्तीगाउँ जाने बाटोको जंगलमा लुकेका छन्, त्यतातिर आ क्र मण गर्, त्यो बाँसको भ्mयाङमै हा न, बाँस काटिरहेका छन् सालेहरुले, त्यही सि ध्याइदे ।’ यस्तै–यस्तै ।
हुन पनि त्यतिबेला साथीहरु स्टे«चर बनाउन बाँसको झ्याङमा गएकै थिए । हामी पनि त घर्तीगाउँ जाने बाटोकै जंगलमा छिपेका थियौं । त्यसैले बेला–बेलामा उनीहरुको सेटमा बोलेका कुराले हामीलाई झस्काउँथ्यो । र, साँच्चिकै देख्यो कि भनेर सल्लाको फेद र बाक्लो झाडीतिर लुक्न बाध्य बनाउँथ्यो ।
हवाई ह म लाको करीब दुई घण्टापछि केही साथीहरु घा इते भएको खबर आयो । र, साथीहरुलाई तत्काल अलि सुरक्षित स्थानतिर ल्याउनुपर्ने भयो ।
आकाशबाट आ क्र मण जारी छ । घा इतेहरुलाई उपचार गर्न साथमा न त पर्याप्त औषधी र डाक्टरहरु छन् न त घा इतेलाई बोक्न स्टेचर वा अरु कुनै साधन नै ।
आ क्र मणकै बीचमा रुखका बोटको कभर लिदै चार/पाँच जना लागेर खुल्ला ठाउँबाट एकजना घा इते जनसेनालाई बल्लतल्ल जंगलमा ल्याइपु¥यायौं ।
हृष्टपुष्ट, मोटो र अग्लो शरीर, ठूलो जीऊ भएका उनलाई चारजनाले बल्लतल्ल जंगलसम्म ल्याएका थियौं । उनको दायाँ खुट्टामा पछाडिपट्टीबाट गो ली लागेको थियो । घा ऊबाट र गत बगिरहेको थियो भने गो ली पनि शरीरमै थियो ।
हेलिको आ क्र मणबाट जोगिदै जं गल सम्म त आइयो तर उनलाई बोक्न हामीसँग स्टे«चर नै थिएन ।
त्यसपछि रुखका हाँगा भाँच्यौं, बोक्रा उतारेर डोरी बनायौं, सलले बेरेर अस्थायी स्ट्रेचर बनायौं र घाइतेलाई बोकेर जंगलको बीचबाट भीरभीरै उकालो लाग्यौं । त्यतिबेला फेरि हाम्रो हालत झनै हेर्नलायक बनेको थियो ।
एकातिर सरकारी सेनाको जासुसी विमानले देख्छ कि भन्ने डर, अर्कोतिर भीरमा खुट्टा फुत्किएला भन्ने डर । काँधमा घा इतेलाई बोकेको अप्ठ्यारो स्टे«चरको गह्रौं भारी । रुनलाई आँखाबाट आँसु र मुखबाट आवाजमात्र निस्किएन त्यतिखेर ।
हिउँदयामको चिसोमा पसिनाले लछप्पै भिजियो । उता घा इते साथीको क्रन्दन पनि कम पीडादायक थिएन ।
उनी भन्दै थिए– ‘कमरेडहरु मलाई एक्लै छोडेर नजानुहोला, ठूलो घाऊ छैन म बाँ च्न सक्छु ।’
अप्ठ्यारो प¥यो भने जंगलमै फा लेर जान्छन् कि भन्ने उनलाई डर थियो । र, धेरै र गत बग्यो भने घाइते जीन्दगी गु ज्रिन पनि के को बेर ?
कतिबेला दृष्टिकभरमा त कतिबेला सल्लाको फेदमा घुस्रिदै, कतिबेला घा इतेलाई स्याउलाले छोपेर त कतिबेला रुखको छायामा लुक्दै एक घण्टाजति लाग्ने उकालोमा चार घण्टा लगाएर साँझ पाँच बजेतिर डाँडोनजिकै पुगियो ।
त्यतिञ्जेल पनि ह वाई आ क्र मण रोकिएको थिएन । हामी एकजना घा इतेसहित साथमा दश/बाह्रजना मात्रै थियौं । अरु साथीहरु कहाँ गए, कति स हिद भए, कति घा इते भए ? अहँ, कुनै पनि जानकारी थिएन ।
पूरै अनिश्चित, सन्त्रस्त र भयभीत थियौं हामी । लाग्थ्यो– ६/६ घण्टा लामो र भी षण ह मलाले हाम्रा आधाजति साथीहरु त स हिद भइसके होलान् । कयौं घाइते भएर फिल्डमै छ ट्पटाइरहेका होलान् । र, र गतको खोला नै बगेको होला ।
हुन सक्छ, अब छिट्टै हाम्रो पनि पालो आउँदैछ ।
तर, त्यस्तो भएन ।
साँझ पर्न लाग्यो, हवाई ह म ला पनि बिस्तारै कम हुँदै गयो । अँध्यारो भएपछि हेलि फर्किने भएकोले हामी कतिबेला अँध्यारो होला भनी प्रतिक्षा गरिरहेका थियौं ।
सरकारी सेनाको घे राबन्दी र अप्रे शन जारी रहे पनि हेलि र विमान फर्किएपछि सम्भावित मृ त्यु को मुखबाट बचेर फर्किन पाएकोमा भने मन केही शान्त भएको थियो ।
झमक्क साँझ प¥यो । हामी घर्तीगाउँको लोसीवाङ झर्ने मुल बाटोकै छेऊमा थियौं । दिनभरको हवाई ह म ला मा दुई/चारजना पनि नदेखिएका सयौं साथीहरु जंगलबाट हुलका हुल निस्किन थाले ।
अँध्यारोमा दुम्लाभन्दा माथिको जंगलबाट लागेको लाइन लोसीवाङ पुग्दा पनि सकिएको थिएन । कोही बिरामी बोकेर, कोही आ–आप्mनो टीम र फर्मेशन खोज्दै यताउति गरिरहेका थिए ।
दिनभरको भी षण ह वाई ह म लाले त्रसित, भयभीत र सह यो द्धा हरुको सम्भावित ब लि दानीको पीडाले सबै सशंकित थिए । सरकारी सेनाको आ क्र म णमा हाम्रो कति क्षति भयो कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था थिएन ।
अँध्यारो रातले धर्ती सारा निलिसकेको थियो । अन्धकार रातसँगै हामी पनि सहयो द्धाहरुसँगको सम्भावित विछोडको पीडाले पिरोलिएका थियौं । र, एक अर्कामा पूरै बेखबर थियौं ।
तीन दिनपछि मात्र थाहा भयो । त्यो भयावह हवाई ह म ला मा तीन जना साथीहरुलाई गु माएछौं भने आधा दर्जनजति घा इते हुनुभएछ ।
सरकारी पक्षले पछिसम्म सयौं ‘आ तंक कारी ल डा कुहरु मा रि ए को हुनसक्ने भन्दै प्र चारबाजी गरिरह्यो ।
लेखन मिति : पुस १८, २०६६ दाङ
लेखक डिल्ली मल्ल पत्रकार तथा साहित्यकार हुन्। मल्ल प्रेससंगठन नेपालको केन्द्रिय सदस्य तथा पत्रकार महासंघ दाङको उपध्यक्ष हुन्।